Soomaaliland Oo garoomada u furtay diyaaradihii Qaramada midoobey ee ay xayiraada saareen – Radio Daljir
Soomaaliland Oo garoomada u furtay diyaaradihii Qaramada midoobey ee ay xayiraada saareen
Luulyo 15, 2013 6:04 b 0
Hargaysa, July 15- 2013 – Maamulka Soomaaliland ayaa maanta daaha ka qaaday in ay ka laabteen go?aankoodii ay horey ugu joojiyeen duulimaadyada diyaaradaha Qaramada Midoobey, kaas oo ahaa ?in aysan ?ka soo degi karin deeganada Soomaaliland.
Wasiirka duulista hawada ee Soomaaliland? Maxamuud Xaashi Cabdi oo shir jaraa?id ku qabtay garoon diyaaradaha ee magaalada Hargaysa, wuxuu sheegay in Soomaaliland ay qaaday xayiraadii dhanka duulimaadka ee ay horey u saartay diyaaradaha Qaramada Midoobey.
Mudane Cabdi wuxuu sheegay in arintaan ay Soomaaliland go?aansatay kadib heshiiskii dhowaan ay Soomaaliya iyo Soomaaliland ku gaareen dalka Turkiga, halkaasi oo ay maalmo kooban ku shireen ergo ka kala socotay labbada dhinac.
Docda kale wasiirka duulista hawada ee Soomaaliland wuxuu shaaciyey in ay jiraan duruufo ka dhashay xayiraadii uu maamulka saaray gaadiidka cirka ee Qaramada Midoobey, wuxuu xusay in hadda kadib ay furan yihiin garoomada Soomaaliland.
Soomaaliland ayaa dhowaan ka dalbaday Qaramada Midoobey in la soo gaarsiiyo doorkooda dhaqaale ee ay ku leeyihiin canshuurta laga qaado hawada Soomaaliya, waxaana arintaani ku soo beegantay goor uu hadalkaas ka soo baxay wasaarada duulista hawada iyo heshiiskii Turkiga oo ay ku jireen qodobo dhinaca hawada dalka ah.
Meleteriga Ethopia oo ka baxay Bay iyo maamulka oo sheegay in u bexeen qorshe dagaal
Ururka IMB oo shaaciyey in uu hoos dhacii ugu weynaa ku yimi weeraradii Burcad badeeda aduunka